Sheekadii Guusha Ee Ibrahim Al Fiqhi | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Sheekada Ibrahim Al fiqhi waa sheeko guul ah oo u qalanta in la sheego. Ibrahim Al fiqhi waa nin u huray noloshiisa intii ugu badnayd inuu dadka kale baro sida looga gudbo caqabadaha ka hor yimaadda intay ku jiraan socdaalka ay guusha ku rabaan.
Ibrahim Al fiqhi wuxuu noloshiisa intii ugu badnayd ku bixiyay sidii uu u faafin lahaa fikir iyo akhlaaq toolmoon. Wuxuu u arkay sheekada noloshiisa inay tahay tusaalaha ugu fiican ee qof gaadhay caannimo balaadhan iyo lacag isagoo kaliya aaminsanaa riyooyinkiisa ilaa ay dhab ka noqotay.
NOLOSHII HORE EE IBRAHIM ALFIQHI IYO SIDA UU HEERKA KU GAADHAY
Hadii aad rabto inaad nolosha guul ka gaadho waa inaad ilawdaa diidmooyinka sababtoo ah badankoodu wax micno ah ma sameeyaan.
Ibraahim Alfiqi noloshiisii hore waxay ahayd mid ka duwan nolosha dadka kale. Wuxuu ku dhashay dalka Masar sanadku markuu ahaa 1950. Wuxuu degree jaamacada ee ugu horeeyay ku qaatay kuliyada dalxiiska iyo Huteeladda.
Kadib qalin jabintiisii waxay sanadku markuu ahaa 1978 isaga iyo xaaskiisii u socdaaleen dalka Canada si ay u helaan nolol fiican. Markii uu tagey dadkii uu la kulmay ee Canada joogay waxay u sheegeen inuu dalkiisii iskaga noqdo, maadaama aanay wakhtigaa waddankaa ka jirtay camal la’aani.
Ibrahim Alfiqhi lacagtii uu markaa haystay waxay ahayd $1000 oo kaliya, dareenkaa xoogganina muu niyad jabin, balse Ibrahim wuxuu bilaabay inuu shaqo raadsado.
Wuxuu galay waraysi shaqo mid kamid ah huteelada dalka waxaanu u sheegay maamulihii hoteelku “Kuma haboonid shaqada huteealada” Ibrahim wuxuu ka tagay halkii isagoo niyad jabsan balse wuxuu go’aansaday in aanu quusan.
Laba maalmood gudahoodna wuxuu helay laba shaqo. Labada shaqo tii ugu fiicnayd na waxay ahayd inuu xalo ama dhaqo weelka cuntada laga cuno mid ka mid ah hoteelada dalkaasi. Inkastoo shaqadaasi aanay ahayn ta ugu fiican haddana wuu aqbalay shaqadii isagoo ku adkaystay inuu socdaalkan kasoo bilaabo meel aad u hooseysa ilaa uu ka gaadhayo meel sare.
Ibrahim wuxuu si dag-dag ah horumar uga sameeyay shaqadiisii marba marka ka dambaysana wuu sii dalacayay ilaa uu markii dambe noqdayba maamulihii huteelka, intaa kadibna wuxuu ku guulaystay abaalmarin ah maamulaha ugu fiican huteelada ee waqooyiga America, intaa kaddib haddana wuxuu noqday mid kamid ah dhiirigaliyaayasha ugu weyn ee dalka Canada, dhamaan Carabta iyo waddamo kaloo badan.
Ibrahim wuxuu Casho ku casuumay ninkii huteelka lahaa ee markii ugu horeysay diiday intii ay ku jireen wada hadalkoodana wuxuu u sheegay inuu yahay wiilkii yaraa uu barigii diiday.
MAXAYNU KA BARRAN KARNAA SHEEKADAN?
Dadka Guulaha Gaadhaa Wax Muhiimad ah ma siiyaan diidmada:
Ibrahim Alfiqhi wuxuu takhasus-kiisu ahaa Hoteelada aqoon badana wuu u lahaa, balse markii ugu horeysay waxaa loo sheegay inaanu ku habboonayn ka shaqaynta huteelada, balse wuxuu ahaa qof aaminsan naftiisa, dhagna umuu dhigin diidmadii lagala hor yimi ilaa uu markii dambe u caddeeyay qofkii diidanaa qaladkiisa.
2. Aamin Naftaada: Sidee buu qof uu sii wadan karaa socdaalkiisa isagoo la kulmaya diidmooyin badan haddana aan rajo dhigayn? Dhamaan dadka guulaha gaadhay waxay si adag u aamin sanaayeen naftooda, taasina waa sababta diidmooyinku aanay u gilgilin kalsoonida ay ka qabaan naftooda.
La Noolow oo jacaylka Illaahay, ku dhaqan sunaha nabigeena (Csw), Yeelo iimaan, Kuna mahadnaq waxaad haysato.
Tags: 7. Sheekadii Guusha Ee Ibrahim Al Fiqhi
Next post Alle Ka Cabsiga
Previous post Sidee Guusha Dhabta ah Loo Gaadhaa? - Qeybta 3aad
Barashada Habka ugu Fiican ee Caruurta Loo Tarbiyeeyo Loona Barbaariyo 13.67 views per day | by Mawliid Axmed Xassan